Weerarkii Shekosh iyo Galadiid ee ay Dadku ku Dhinteen Waxaa ka Dambeeyey Beesha Jwxo-shiil ee ku Adeegata Magac Jabhadeed. – Rasaasa News
Mar 23, 2010 beel, Jwxo-shiil, ONLF
“Qawlaysato qabiila oo magac Jabhadeed ku qadhaabsada dadkana qadha ku haya oo degmo iyo daaq doon ah, oo dab iyo rasaasba wadata daris ma lala noqon karaa?” sidaasna waxaa yidhi mid ka mid ah odayaasha degmada Shekosh.
Bishan bilowgeedii ayey ahayd kolkii dablay aan la garanaynin ay dhaxda u galeen madaxdii gabalka Qoraxey, masuuliyiin iyo dadweyne ka tagay degmada Shekosh, halkaas oo ay dab ku huwiyeen baabuur safar ah oo ay saaraayeen. Waxaa werarkaas ku dhintay laba ruux shana way ku dhaawacantay.
Laba todobaad ka dibna waxaa tuulada Galadiid oo u dhaxaysa degmada Shekosh iyo degmada Qabridahare una dhaw dhinaca Shekosh, dad aan la garanaynin ay ku dileen laba ruux midna way ku dhaawaceen. Dadka la dilay ayaa ahaa dadka degan tuulada oo aan iyagu shaqo ku lahayn arimo dawladeed iyo shaqaalenimo midna.
Waxaa kale oo afar habeen ka hore iyana dad aan la garanaynin ay dhaawac gaadhsiiyeen laba ruux oo ka mid dadka shacabka ah ee degan Tuulada Ceel Xaar oo wax yar u jirta degmada Qabridaha.
Degmada Shekosh waxay ka nabdoonayd mudo dheerba dhibaatooyin colaadeed dhinaca ay doonaan ha ka socdaane. Dadweynaha degan degaanada Shekosh hoos taga, waxay la yaabeen falalkan ku soo kordhay degaanka. Labada goobood ee ay dhibaatadu ka dhacday waa Shekosh iyo Galadiid, waxaa markiiba laga sameeyey raad qaad iyo baadi doon dadkii fal dambiyeedka gaystay.
Hadaba, sida la cadeeyey waxaa dhibaatada gaystay dad degaanka daaqsin u degan oo waa nasiib daro wayne si qabiila ugu adeega Jwxo-shiil raalina ka ah dhibaataynta dadka reer Shekosh. Dadkani waxay hoy siiyeen oo ay soo qariyeen dadka falka gaystay oo ka yimid tuulo la daris ah degmada Shekosh kana tirsan gabalka Dhagaxbuur waa tuulada Guna-Gado.
Arintan fal dambiyeedka ah ee lagu bartilmaameedsaday degaanka Shekosh ayaa keentay yaab iyo amakaag. Waxaana ka sii yaab badnaatay kolkii la cadeeyey saddexda dhacdo ee bishii ugu dambaysay ka dhacay gabalka Qoraxeey in ay ka dambaysay Lafta Jwxo-shiil [Liibaan Cukur] oo iyagu dilal ku gaysta magac Jabhadeed [ONLF].
Odayaasha degaanka Shekosh ayaa waxay ku kulmeen laba maalmood ka hore Tuulada riiga ama Galadiid, kulankaas oo ay kaga tashanayeen wixii ay ka samayn lahaayeen dhacdooyinkan foosha xun ee ay samaysay beesha degaanka martida u ah.
Waxaa loo diray fariin odayaasha beesha gaysatay saddexda dhacdo ee dilka iyo dhawac ah, si ay uga soo jawaabto wada hadal la rabo in laggaga xaajo qaato dhiiga dadka ay dileen. Odayaasha dadka falkan gaystay loogama fadhiyo in ay garawsho iyo gar midna ka galaan dhibaatooyinka ay gaystaan miyi iyo magaalo midna. Arintaas dhago adayga ah oo dhibaatadeeda leh.
Arinta kaliya ee ku kalifaysay in ayna cidna u garaabin ama ayna ka gar qaadan ayaa ah isku halayn magaca ururka ONLF, oo dab iyo maal wixii uu lahaaba u beeshan gacanteeda galay.
Waxayana beeshani magac Jabhadeed ku gashay dakaneyaal badan sida; Bahgari oo hal maalin ay todoba oday ay ka dileen, Abraahiin oo sidaas si la mid ah ay u galeen iyo arinkii ugu dambeeyey ee dilkii Dr. Maxamed Siraad Dolal, oo wali gar iyo garawsho midna laga la,a yahay.
Dr. Dolal, oo muddo dheer la dagaalamayey Itobiya, ayeyna cidina ka hadasheen hadii uu ku dhiman lahaa gacan Itobiya, laakiin waxaa nasiib daro iyo qaadansho waa noqotay, kolkii duhur cad raga la dhashay ay Dr. Dolal si beel ah ugu dileen dhulkii uu ciidamada Itobiya kula dagaalami jiray.
Dhibaatooyinka ay maanta beeshani ka wado degaanka qoraxey, gaar ahaana degaanka shekosh iyo degaano kale oo gabalka ah ayaa ah mid ay ku beegsanayaan beelaha la dariska ah iyaga oo foodsaare ka dhiganaya magac Jabhadeed.